Vaovao - Fahatongavana vaovao ho an'ny vibrator azo akanjo tsy hita maso sy bala lavitra
Rojo akoho / Sleeck akoho
Fahatongavana vaovao ho an'ny vibrator azo akanjo tsy hita maso sy bala lavitra
Tao anatin'izay taona faramparany izay, niaraka tamin'ny fitomboana tsikelikely amin'ny fanentanana ampahibemaso, ny fanovana ny fahalalan'ny fiarahamonina ny indostrian'ny fahasalamana ara-pananahana, ary ny fisondrotana ankapobeny ny fahatsiarovan-tenan'ny mpanjifa sy ny fanabeazana, nanjary milamina tsikelikely ny fihetsiky ny tsirairay manoloana ny kilalao fanaovana firaisana, ary ny vokatra ara-pananahana mifototra amin'ny ny fiheverana ny fahasalamana dia nahasarika kokoa ny sain'ny olona. Ekena sy eken'ny vehivavy maro kokoa izy ireo, ny angon-drakitra koa dia mampiseho fa ny tahan'ny fitomboana isan-taona amin'ny indostrian'ny kilalao ara-nofo dia mitombo isan-taona.
Na izany aza, ny indostrian'ny firaisana dia mifangaro zavatra tsara sy ratsy matetika mahakivy ny mpanjifa. Mba hahazoana traikefa vokatra avo lenta kokoa ho an'ny mpanjifa, Greenbaby dia nandefa ny pataloha mihetsiketsika azo zahana tsy hita ho an'ny vehivavy, izay manambatra mpanao otra U + lolo kely + bala mihetsiketsika + vibrator, vokatra vaovao misy marika efatra misy lahasa efatra.
Voalohany indrindra, nanodina ny fahatsapan'ny tsirairay ny fahatsapana ny endrika kilalao fanaovana firaisana ara-nofo taloha. Tsy endrika tsy azo sarahina intsony izy. Ny endrika mahafinaritra dia miaraka amina fanaraha-maso kely. Ny vehivavy tsirairay dia aleony amin'ny bika aman'endriny. Mahafinaritra ny mitafy tsy misy
mitondra lanja. Ny vokatra dia mifanaraka amin'ny endrika ergonomika ary tsy miova rehefa tonta lava. Ary tsy manohana ny faritra tsy miankina izy io, tsy misy fiantraikany amin'ny mandeha an-tongotra mahazatra.
Ho an'ny ara-pitaovana, izy io dia vita amin'ny alim-bika amin'ny sakafo misy endrika feno, izay mety ho tantera-drano sy fanoherana bakteria. Ho fanampin'izany, ny tsorakazo dia azo aolaka amin'ny sitrapo. Amin'ny fanovana ny toerana, ny vokatra dia mety hifanaraka tsara amin'ireo faritra tsy miankina ary hitafy. Izy io dia afaka manarona mafy ny vavonin-koditra, afaka mifanaraka tsara sy miadana ny teboka mora tohina, ary tsy manakana ny fidirana sy ny fanosehana aorian'ny fanaovana azy, izay azo ampiasaina eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary hanatsara ny fahafinaretan'ny firaisana.
Ho an'ny fiasa dia mandray hovitrovitra 10-mode. Rehefa velomina dia misy motera efatra nozaraina amina teboka mihetsiketsika samihafa amin'ny fotoana iray. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo hafanana mihovotrovotra samihafa, ny hafainganam-pandeha dia matanjaka araka izay tianao, manome anao hafainganam-pandeha sy fientanam-po hita maso. Ho fanampin'izany, amin'ny famolavolana ny ampahany azo ampidirina, dia naka endrika voaravaka kofehy sy convex izahay, izay toa malefaka sy sosona.
Ho fanampin'izany, ny pataloha mihetsiketsika dia miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby, bokotra switch, bokotra mihetsiketsika, tendrony bokotra iray, fandraisana mari-pahaizana 360 degre, halavirana fanaraha-maso voafetra manodidina ny 30 metatra, fantsom-pianakaviana tsara kokoa ary fahatsapana teknolojia mahatonga azy io ho azo ampiharina. Azonao atao ny milalao izay tadiavinao amin'ilay lavitra kely. Noho ny lalao tsy misy tariby, tsy misy fetra! Rehefa mandro dia eo ivelan'ny varavarana ny fanaraha-maso lavitra, rehefa handeha hiasa dia manadala sy manao raharaha an-trano mangingina izy. Mipetraha orgasme eo noho eo, miaraka amina famolavolana mifantoka, orgasme bokotra iray mamelombelona kokoa, inona ilay orgasme iray bokotra, ary manatsara kokoa ny refin'ny fihovotrovotra, mba hahafahan'ny vehivavy manentana ny aingam-panahy matanjaka sy mahafinaritra kokoa rehefa manakaiky ny orgasme, ary ny hipoitra ny orgasme!
Ny pataloha Uyi avy hatrany dia mitafy atody mihetsiketsika, fientanentanana tsy hita, fifaliana tsy hita maso, fahafaham-po azo entina amin'ny vatana, fitahiana ara-nofo amin'ny vatana, mba hanomezana fahafaham-po ny tenanao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra hoy i Bangbangdandan veloma!
Fotoana fandefasana: Jul-06-2021
Greenbaby dia nanangona traikefa be dia be mba hahafahan'ny mpanjifa miankina amintsika tokoa. Rehefa miverina mijery ny làlana mivoatra isika dia be dia be
Lalan'i Huanzhen # 227, Faritra Indostrialy Shangdong, Tanànan'i Qishi, Guangdong, Sina.